DELL INSPIRON 3521 - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Ịwụnye ọkwọ ụgbọala maka Dell Inspiron 3521
Ngwa kọmputa ọ bụla chọrọ software pụrụ iche iji rụọ ọrụ. Laptọọpụ nwere nnukwu ọnụ ọgụgụ dị otú ahụ, nke ọ bụla n'ime ha chọrọ ngwanrọ nke ya. Ya mere, ọ dị mkpa ịmara otú ị ga-esi wụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka laptọọpụ Dell Inspiron 3521.
Enwere ọtụtụ ụzọ dị irè isi wụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka laptọọpụ Dell Inspiron 3521. Ọ dị mkpa ịghọta otú onye ọ bụla n'ime ha si arụ ọrụ, gbalịa ịhọrọ onwe gị ihe kacha mma.
Usoro 1: Ebe nrụọrụ weebụ Weebụ Dell
Ntanetị Intanet nke onye na-emepụta ihe bụ ezigbo ụlọ nkwakọba ihe nke ngwanrọ dị iche iche. Ọ bụ ya mere anyị ji achọ ndị ọkwọ ụgbọala ebe ahụ.
Gaa na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke onye nrụpụta.
Na isi mmalite nke saịtị ahụ anyị na-ahụ ngalaba "Nkwado". Mee otu pịa.
Ozugbo anyị pịa aha ngalaba a, akara ọhụrụ gosiri ebe ịkwesịrị ịhọrọ
isi "Nkwado ngwaahịa".
Maka ọrụ ọzọ, ọ dị mkpa na saịtị ahụ na-achọpụta laptọọpụ ahụ. Ya mere, pịa njikọ ahụ "Họrọ site na ngwaahịa niile".
Mgbe nke ahụ gasị, windo ahụ mepụtara ọhụrụ pụtara n'ihu anyị. Na ya, anyị pịa njikọ ahụ "Laptọọpụ".
Ọzọ, họrọ ụdị "Inspiron".
Na nnukwu ndepụta anyị na-achọta aha zuru ezu nke ihe nlereanya ahụ. Ụzọ kachasị mfe bụ iji ma ọ bụ nyocha ọchụchọ ma ọ bụ nke ahụ na saịtị ahụ.
Naanị ugbu a, anyị na-abanye na ibe nke ngwaọrụ ahụ, ebe anyị nwere mmasị na ngalaba ahụ. "Ndị ọkwọ ụgbọala na mgbasa ozi".
Iji malite, anyị na-eji usoro ọchụchọ akwụkwọ. Ọ kachasị mkpa na oge ndị a anaghị achọta ngwanrọ ọ bụla, kama ọ bụ naanị ụfọdụ kpọmkwem. Iji mee nke a, pịa nhọrọ "Chọta n'onwe gị".
Mgbe nke ahụ gasịrị, anyị nwere ndepụta zuru oke nke ndị ọkwọ ụgbọala. Iji hụ ha n'ụzọ zuru ezu, ị ghaghị ịpị akụ na-esote aha ahụ.
Iji budata ọkwọ ụgbọala ịchọrọ ịpị bọtịnụ ahụ. "Download".
Mgbe ụfọdụ site na nbudata dị otú ahụ, a na-ebudata faịlụ .exe, na mgbe ụfọdụ, a na-ebudata ihe archive. Onye ọkwọ ụgbọala a dị ntakịrị, n'ihi ya ọ dịghị mkpa iji belata ya.
Iji wụnye ya anaghị achọrọ ihe ọmụma pụrụ iche, ị nwere ike ịrụ ọrụ ndị dị mkpa site na ịgbaso ntuziaka ahụ.
Mgbe arụchaa ọrụ ahụ chọrọ ịmalitegharịa nke kọmputa ahụ. Nyocha a nke usoro mbụ ahụ agwụla.
Usoro 2: Nchọta na akpaaka
Usoro a jikọtara ya na ọrụ nke saịtị ahụ. Na mmalite anyị họọrọ ọchụchọ ntuziaka, mana enwekwara otu akpaaka. Ka anyi gbalịa itinye ya na ndi ozo.
Iji malite na anyị na-eme otu ihe ahụ site na mbụ usoro, ma naanị ruo 8 isi. Mgbe ya, anyị nwere mmasị na mpaghara ahụ "Achọrọ m ntụziaka"ebe ị chọrọ ịhọrọ "Chọọnụ ndị ọkwọ ụgbọala".
Nzọụkwụ mbụ bụ akara nbudata. Naanị ị ga-echere ruo mgbe a kwadebere ibe ahụ.
Ozugbo nke ahụ gasịrị, ọ ga-adị anyị mma. "Dell System Find". Mbụ ịkwesiri ịnakwere nkwekọrịta ikike, n'ihi nke a, anyị na-etinye akara na ebe a kapịrị ọnụ. Mgbe pịa nke a "Nọgidenụ n'ihu".
A na-arụ ọrụ ọzọ na ọrụ ahụ, nke ana ebudatara na kọmputa. Ma, ị ga-ebu ụzọ wụnye ya.
Ozugbo nbudata ahụ gafere, ị nwere ike ịga na ebe nrụọrụ weebụ nke onye nrụpụta, ebe mbụ nke atọ nke ịchọpụta akpaka ga-agwụ. Ọ na-anọgide na ichere ruo mgbe usoro ahụ na-ahọrọ ngwanrọ dị mkpa.
Ọ na-anọgide na ịwụnye ihe dị na saịtị ahụ ma malitegharịa kọmputa ahụ.
Na nke a, nyocha nke usoro ahụ agwụla, ọ bụrụ na ịnwebeghị ike ịwụnye ọkwọ ụgbọala ahụ, ị ​​nwere ike ịga n'ihu na usoro ndị a.
Usoro nke 3: Njikwa ọrụ
Ọtụtụ mgbe, onye na-emepụta ihe na-emepụta uru nke na-achọpụta na ọnụnọ ndị ọkwọ ụgbọala na-akpaghị aka, na-ehichapụ ndị na-efu ma na-emelite ndị agadi.
Iji budata ọrụ ahụ, ịkwesịrị ịgbaso ntuziaka nke usoro 1, mana naanị ruo 10 isi, ebe n'ime ndepụta buru ibu anyị ga-achọta "Ngwa". Mepee ngalaba a, ịchọrọ ịchọta bọtịnụ ahụ "Download". Pịa ya.
Mgbe nke ahụ gasịrị, faịlụ nbudata na-amalite na ndọtị .exe. Mepee ya ngwa ngwa mgbe ibudatara zuru ezu.
Ọzọ anyi kwesiri idozi ngwa ahia. Iji mee nke a, pịa bọtịnụ ahụ "Tinye".
Nhazi ọkachamara amalite. Ị nwere ike ịmepe ihuenyo mbụ ahụ site n'ịhọrọ bọtịnụ ahụ "Na-esote".
Mgbe nke ahụ gasịrị, a gwara anyị ka anyị gụọ nkwekọrịta ikike. Na nke a, dị nnọọ ịkwanye na pịa "Na-esote".
Nanị na nhazi nke ọrụ a malitere. Ọzọkwa, pịa bọtịnụ ahụ "Wụnye".
Ozugbo nke a gasịrị, Wizard Wụnye amalite ọrụ ya. Ejighị faịlụ ndị dị mkpa, a na-ebudata ọrụ ahụ na kọmputa. Ọ ka na-echere ntakịrị.
N'ikpeazụ, dị nnọọ pịa "Emecha"
A ghaghị imechi windo obere, wee họrọ "Mechie".
Njirimara adịghị arụ ọrụ, ka ọ na-enyocha na ndabere. Naanị obere akara ngosi na "Taskbar" na-enye ọrụ ya.
Ọ bụrụ na ọkwọ ụgbọala ọ bụla ga-emelite, a ga-egosipụta nhọta na kọmputa. Ma ọ bụghị ya, ọrụ ahụ agaghị enye onwe ya n'ụzọ ọ bụla - nke a bụ ihe na-egosi na ngwanrọ niile zuru oke.
Nke a mezue usoro a kọwara.
Usoro 4: Usoro nke atọ
Enwere ike inye onye ọkwọ ụgbọ ala ọ bụla na-enweghị ike ileta ebe nrụọrụ weebụ gọọmenti rụrụ. Naanị otu n'ime mmemme nke atọ nke na-eme ka laptọọpụ ahụ na-akpaghị aka, na ibudata ma wụnye ndị ọkwọ ụgbọala. Ọ bụrụ na ị maghị ụdị ngwa ndị ahụ, ị ​​ga-agụrịrị isiokwu anyị, ebe a na-akọwa nke ọ bụla n'ime ya dị ka o kwere mee.
Onye isi n'etiti mmemme nke nke a nwere ike ịkpọ ya Driver Booster. Ọ dị mma maka kọmputa ebe enweghị ngwanrọ ma ọ bụ na ọ dị mkpa ka emelite ya, ebe ọ na-ebudata ndị ọkwọ ụgbọala niile, ọ bụghị iche. Echichi na-ewere ọnọdụ n'otu oge n'ihi na ọtụtụ ngwaọrụ, nke na-ebelata oge echere. Ka anyị gbalịa ịghọta usoro ihe a.
Ozugbo ebudatara ngwa ahụ na kọmputa, ọ ga-arụ ọrụ. Iji mee nke a, na-agba faịlụ nwụnye ma pịa "Nabata ma wụnye".
Ihe na-esote bụ usoro nyocha. A choro usoro ahụ, ọ gaghị ekwe omume ịwụ ya. Ya mere, na-echere ngwụsị nke usoro ihe omume ahụ.
Mgbe nyochachara, a ga-egosipụta ndepụta zuru ezu nke ndị ọkwọ ụgbọala ma ọ bụ ndị na-ebubanyeghi. Ị nwere ike na-arụ ọrụ na nke ọ bụla n'ime ha ma ọ bụ rụọ ọrụ nbudata niile n'otu oge ahụ.
Ozugbo ndị ọkwọ ụgbọala niile na kọmputa na-edekọ na nsụgharị ndị dị ugbu a, ihe omume ahụ kwụsịrị ọrụ ya. Naanị Malitegharịa ekwentị gị.
Usoro 5: ID ID
Maka ngwaọrụ ọ bụla enwere nọmba pụrụ iche. Iji data a, ị nwere ike ịchọta onye ọkwọ ụgbọala maka ihe ọ bụla nke laptọọpụ n'enweghị nbudata ihe omume ma ọ bụ ihe ọrụ. Ọ dị ezigbo mfe, n'ihi naanị ị chọrọ njikọ Ịntanetị. Maka ntuziaka zuru ezu ị ga-agbaso akara hyperlink n'okpuru.
Usoro 6: Standard Windows Ngwaọrụ
Ọ bụrụ na ndị ọkwọ ụgbọala dị gị mkpa, mana ịchọrọ ibudata mmemme ma gaa na saịtị ndị ọzọ, mgbe ahụ, usoro a n'ụzọ doro anya na-adịrị gị mma karịa ndị ọzọ. Ọrụ niile na - eme na ngwa Windows dị. Usoro ahụ adịghị arụ ọrụ, ebe ọ bụ na ọ na-etinyekarị ngwanrọ, ma ọ bụghị ọkachamara. Ma maka oge mbụ nke a ezuola.
Nke a mejuputara ụzọ ọrụ iji wụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka laptọọpụ Dell Inspiron 3521.